Iji Media mmekọrịta iji mbo mbuli gị B2C n'ọkwá | Martech Zone
N'agbanyeghị ụlọ ọrụ ị nọ, ọ bụrụ na azụmahịa gị dị na ngalaba B2C, ohere ọ ga-adị mma na ị na-eche asọmpi dị egwu - ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ahịa brik na ngwa agha. A sị ka e kwuwe, ị maara ego ole na ole ndị ahịa na-azụ ahịa n'ịntanetị n'oge a. Ndi be anyi ka na-aga brik & ngwa agha; ma mma nke ịzụta n'ịntanetị emeela ka ọnụ ọgụgụ ndị na-elekọta ụlọ ahịa na-adalata. Otu n’ime ụzọ azụmaahịa dị ịnwa imezi nke a bụ site n'ịgba n'ọkwalite - n'ihi na Kupọns, ọhụrụ yiri nkata, nnukwu ego, wdg Ọzọkwa ezie na, ndị otu ndị asọmpi anyị tụlere na-agba ọsọ n'ọkwá ndị dị nnọọ ka na-adọrọ adọrọ…. ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe na-adọrọ adọrọ karịa gị.
N'oge a, nkwalite ndị azụmaahịa na-agba ezughị ịkwọ ụgbọala na-echekwa n'ime ụlọ ahịa ma ọ bụ ọbụlagodi ịntanetị. O nwere ike ịbụ na ndị asọmpi gị na-agba ụfọdụ nkwalite dịka gị - oge ụfọdụ. Nke ahụ kwuru, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa ga-eji "mma" dị ka ihe na-ekpebi ma hà ga-eso ntọala gị ma ọ bụ na ha agaghị: ntụkwasị obi dabere na nyocha ịntanetị, ịbịaru ụlọ gị nso (ọ bụrụ na ụlọ brik & ngwa agha), nkwanye sitere na enyi ( izere nnyocha) na ahụmahụ (na kwuru oruru) bụ ihe ndị kasị-ekpebi ihe. Na nkenke, nkwalite gị kwesịrị ịpụ iche.
Iji mee ka mgbasa ozi ika gị pụta, ị ga - eme ihe dị iche. Otu n'ime ụzọ kachasị mma iji mee nke a bụ site na ijikọ ahụmịhe mmekọrịta na weebụsaịtị gị. Ahụmahụ mmekọrịta dị mkpa n'ihi na ha na-enye ụdị ohere ohere inye nduzi na mkpebi dị mkpa, ma ọ bụ BIG ịzụta. Ọ na-enyekwa ndị ahịa ohere ịme ndị ahịa ha obi ụtọ. Ndị a bụ ụfọdụ nhọrọ maka ahụmịhe mmekọrịta ị nwere ike iwebata na webụsaịtị gị ka ị wee nwekwuo njikọ aka, n'ikpeazụ, mee ka mgbanwe gbanwee.
Maka azụmaahịa ndị na-ere ngwaahịa na oke “oke oke” nke na-achọkarị echiche dị ukwuu (ụgbọ ala, arịa ụlọ, ego mgbazinye ego, wdg), ndị mgbako bụ ezigbo ọdịnaya mmekọrịta nke nwere ike iduzi ndị na-eri gị mkpebi mkpebi ziri ezi. Oge ụfọdụ, ọbụlagodi ndị na-azụ ahịa ego na ndị kwụsiri ike na-achọ ịlaghachi azụ iji chọpụta ihe ha nwere ike na enweghị ike imeli. Fọdụ n'ime ndị na-ahụkarị mgbakọ ego nke anyị na-ahụ bụ: Calculators na-akwụ ụgwọ ọnwa, ndị nwere ọmụrụ nwa na ndị na-akwụ ụgwọ ego.
N'ezie, ego abụghị naanị ihe kpatara ịchọrọ mgbako. Ndị ahịa gị nwere ike gbakọọ ole ohere ha nwere maka akwa ndina ọhụrụ. Ma ọ bụ, ndị na-eri gị nwere ike ịchọ gbakọọ akụkụ ahụ ha, ma ọ bụ ezigbo ogo ha, iji chọpụta usoro mmega ahụ kwesịrị ha. Isi ebe a bụ na ndị ngụkọta oge na-eme mkpebi ka mfe, n'ihi na ha na-enye ụkpụrụ ọnụọgụ na ụfọdụ mgbanwe. Ọnụ ọgụgụ ka mma (ma ọ dị elu ma ọ bụ ala), oge ka mma onye na-azụ ahịa na-achọta azịza ha - nke ahụ na-edugakwa na ebumnuche dị ukwuu ịzụta.
Calculators nwere ike ịba uru dị ukwuu maka ndị ahịa na-achọ isonye na nkwalite gị ugbu a. Agbanyeghị na enwere ike iji ya rụọ ọrụ n'oge ọ bụla, ikike ịchọta azịza nye ajụjụ ndị dị mkpa na-akwagide ha. Ka ha na-amatakwu banyere ọnọdụ ha, otú ahụ ka ha ga na-achọkarị ịzụ ihe. Ma ọ bụrụ na e nwere ihe nkwalite na-aga n'ihu (ka anyị kwuo, "Enweghị Paykwụ Untilgwọ Ruo 2017"), onye na-azụ ahịa na-anwa ịgbakọ ihe ha ga-enweta n'ọdịnihu tupu ha emee nkwa ahụ. Ozugbo ha nwere azịza ha, ha ga-azụta.
Mgbe ụfọdụ enweghị mkpebi nke onye na-eri ihe emetụtaghị ego (ma ọ bụ otu ngụkọta oge); kama, nhọrọ dị ọcha. Mgbe a na-enye ndị ahịa ọtụtụ nhọrọ dị ukwuu (nke a na-ahụkarị n'oge nkwalite), ikike ịme mkpebi na-egbochi ha mgbe ụfọdụ. Ọ na-ada nzuzu, mana ọ bụ eziokwu kpamkpam. Fọdụ ndị na-azụ ahịa ga-ada mbà ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ịbịaru mkpebi ịzụta - ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ bụ nnukwu ịzụta. Ọ bụrụ na ndị na-azụ ahịa anaghị etinye aka na ihe ọ bụla, echiche ha bụ “Ọfọn, ọ gaghị adị oke otu ahụ. Gịnị mere m ga-eji mebie oke ego ma ọ bụrụ na m nọ na ngere? " ha gawazie.
Ahụmahụ nyocha bụ ụzọ ọzọ dị mma iji mee ka ndị na - azụ gị rida ihe eji azụ ihe - ọkachasị ma ọ bụrụ n'ịkwalite mgbasa ozi gị n'ịntanetị. N'ihi na nkwalite na-enwekarị nhọrọ nke ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ onyinye, nyocha nwere ike iduzi ndị na-azụ ahịa gaa otu n'ime nhọrọ ndị dịnụ.
Ka anyị jiri igwe dị iche iche dịka ọmụmaatụ. Dịka o yikarịrị ka ị maara, ndị otu ụgbọ ala nwere ọtụtụ ụlọ ahịa n'otu mpaghara; na ụlọ ahịa ọ bụla na-eresị otu ụdị ụgbọ ala (Toyota, Kia, Hyundai, wdg). Ka anyị kwuo na onye na-eri ahịa anụla ihe ọma gbasara otu ụgbọ ala a; na ndị na-ere ahịa niile (na ngalaba akpaaka) na-esonye na nkwalite "Enweghị ụgwọ ruo 2017". Ọ niile na-ada nke ọma ma dị mma… ruo mgbe ị chọpụta na n'ji bụ kpamkpam ejighị n'aka nke ihe anam / nlereanya nke ụgbọala ha chọrọ iso na. Iji gbochie onye ahịa ahụ ịga ahịa ọzọ, otu ndị na-akpaghị aka nwere ike itinye ntule na weebụsaịtị ha iji duzie ha mkpebi ịzụta. Idealdị nyocha dị mma nwere ike ịbụ nke na-enye "mee / ihe atụ" nke ndị na-azụ ahịa dabere na azịza ndị ahịa na-enye - "ụdị ụgbọ ala ị kwesịrị ịkwọ ụgbọala?" ntule.
Otu ụzọ dị mma iji kpalite ahụmịhe mmekọrịta maka nkwalite gị bụ ịme ka ahụmịhe mmekọrịta gị na nkwalite. N'agbanyeghị ụdị ahịa ndị ọzọ ị na-aga, ị nwere ike gbaa ndị na-azụ ahịa ume ka ha gaa na ụlọ ahịa gị (ma ọ bụ weebụsaịtị) jiri egwuregwu ngwa ngwa merie - na-enye ohere iji nweta nnukwu onyinye, na ịnye ndị na-adịghị enye onyinye ma ọ bụ nkasi obi. merie jackpot. Ahụmahụ ndị a nwere ike ịgụnye: igwe oghere dijitalụ, wiil ndị nwere mmeri (dị ka Wheel of Fortune) ma ọ bụ ụfọdụ ahụmịhe ndị ọzọ enweghị usoro nke na-ewepụta otu onye mmeri ukwu. Onyinye ma ọ bụ onyinye ndị ọzọ (nke a pụrụ ịkpọtụ tupu esonye) nwere ike ịbụ ihe bara uru dị ka ndụmọdụ n'efu, enweghị ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa, ego ala, ma ọ bụ $ 100 kwụsịrị ịzụta $ 800 ma ọ bụ karịa. Ihe kachasị mma bụ na ụdị ahụmịhe ndị a na-atọ ụtọ nke ukwuu, n'ihi na ha na-eme ka obi na-atọ ụtọ ma ọ naghị eduga ndị ahịa iwe ma ọ bụ ndị mgbakasị ahụ. Eziokwu ahụ bụ na ha na-ekpori ndụ na ha "na-emeri" ihe na-eme nke a nnukwu ụdị ahụmịhe mmekọrịta - dabere na ụlọ ọrụ, n'ezie.
Ikpeazụ mmekọrịta ahụmahụ ụdị m ga-aga bụ “quizzes.” Ọ bụ ezie na ajụjụ anaghị enyekarị ihe bara uru (site na uru bara uru, m pụtara azịza, onyinye ma ọ bụ ihe nrite), ha nwere ike ịhapụ ndị ahịa nwere afọ ojuju onwe ha. N'ozuzu, mgbe ndị ahịa nwere obi ụtọ ma ọ bụ nwee afọ ojuju maka onwe ha, ha ga-agwa ndị enyi ha. N'ihe banyere ajụjụ (n'ụdị ahụmịhe mmekọrịta), ndị na-azụ ahịa ga-enwe ọchịchọ ịkekọrịta nsonaazụ ha na mgbasa ozi mmekọrịta - ọbụnakwa maa ha aka. Ọzọ, n'agbanyeghị na enweghị “ihe a ga-ahụ”, ụdị ahụmịhe ndị a magburu onwe ha maka ịkpọ aha. Ka otu ajụjụ quiz na-achọ ịmata ihe ndị mmadụ na-amata, ọ bụ ihe a maara nke ọma na ika ahụ na - amatakarị ụdị akara ahụ. Ma rue n’ọkwalite, ajụjụ ndị ị na-ajụ na ajụjụ ahụ nwere ike igosipụta isiokwu nke nkwalite n'ịntanetị - nke gara n'ihu ime ka ịmata ihe nke ndị ahịa.
Kedu otu ụdị ụdị ahụ ga-aba uru maka azụmaahịa gị? Gwa anyị na ihe ndị dị n'okpuru!
Tags: ahụmahụ mgbasa ozimmekọrịta ndị na-azụ ahịacontent Marketingọdịnaya mmekọrịtammekọrịta mgbasa ozinkwalite ntanetị